China TWS Earbuds ine yakaderera latency Manufacture uye Fekitori |Roman
Nguva yeMumhanzi: 4.5H
Nguva Yekutaura: 4.5H
Nguva Yakamira: 75H
Nguva yekuchaja: 2H
Kuchaja bhokisi: 300 mAh
Headset bhatiri: 45 mAh
Otomatiki paring mushure mekutora uye nehungwaru kubatana.
Bluetooth V5.0, kushandiswa kwesimba kunoderedzwa ne30%.
Yechokwadi isina waya yekupa yakatsetseka yekutamba chiitiko pasina kunonoka (Yakajairwa TWS bluetooth headset ine kunonoka kwepamusoro pe200ms, uye kunonoka kunoonekwa kwevanhu kungangoita 100ms.
Shandura zvakasununguka pakati peMumhanzi Modhi uye Mutambo weMutambo: Unogona kushandura wakasununguka mamodhi pakati peMumhanzi Mode neGaming Mode nekubata katatu neanonzwa touch control.
Yakazara Kubata Kudzora: NeIntelligent touch control, unogona kudzora mimhanzi inoridza / kumbomira, inotevera / yapfuura rwiyo, kupindura / kusungirira kufona, mutambo modhi uye mimhanzi modhi yekuchinjisa nekubata munzeve inonzwa nzvimbo.
IPX5 Mvura Inodzivirira: IPX5 Mvura isingapindire inochengetedza mahedhifoni asina waya kubva padikita kana kumwaya mvura, yakanakira kumhanya, skiing, nezvimwewo (kwete yekushambira).Bluetooth 5.0 earbuds isarudzo yakanaka kune zviitiko zvekunze.
Yakachengeteka, Yakagadzikana uye Inogadzikana Fit: Iyo ergonomic dhizaini yeTWS Yemitambo earbuds inopa yakachengeteka, yakagadzikana uye yakagadzika fit, kuti isazobuda zvisingatarisirwi.
Yakapfava bhatiri bhokisi reimba uye kuchaja mahedhifoni.
1. Bvisa kuruboshwe (L) uye kurudyi (R) mahedhifoni kubva mubhokisi rekuchaja.Kuruboshwe uye kurudyi mahedhifoni anozadza otomatiki AiroStereo pairing uye yekubatanidza, uye zviratidzo zvemahedhifoni anopenya tsvuku uye bhuruu neimwe nzira.
2.Audio transfer: Panguva yekufona, dzvanya bhatani reMFB kuruboshwe / kurudyi chiteshi headphone, uye sunungura kusvikira beep yakurudzirwa.Dzokorora kuita uku kuendesa odhiyo pakati pefoni yako uye mahedhifoni.
3.Nyamudza pa/kudzima: Panguva yekufona, tinya kaviri kiyi yeMFB kuruboshwe kana kurudyi headset.Basa rembeveve rakabatidzwa, richiperekedzwa nezwi rekuti "Nyamurai"Dzokorora kushanda.Basa rembeveve rakadzimwa, richiperekedzwa ne "Nyamadza" izwi rekukasira.
4.Kupindura kufona: Kana kufona kuchipinda, tinya bhatani reMFB kuruboshwe / kurudyi chiteshi headphone kamwe.Beep inokurudzirwa.
5.Music playing/pausing: Kana iyo headset ichiridza mimhanzi, dzvanya bhatani reMFB kuruboshwe / kurudyi chiteshi headphone kamwe kuti umbomira.Dzokorora chiitiko ichi kuti utangezve kutamba.
6.Kugonesa / Kudzima iyo yakaderera kunonoka mode: Mukumira kana mimhanzi mamiriro, tinya MFB kiyi kuruboshwe kana kurudyi headset katatu.Iyo yakaderera kunonoka modhi inogoneswa, izwi rekumhanyisa rinoridzwa, uye chiratidzo chinopenya bhuruu.Unogona kudzokorora oparesheni iyi kudzima iyo yakaderera kunonoka modhi.
Zvakapfuura: Chokwadi Wireless Active Noise Kudzima Earbuds
Zvinotevera: TWS Bluetooth Earbud ine IPX5 isina mvura
Chokwadi Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Char...
Bluetooth Headset Ine Mic, Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Munzeve Earphone, Noise Kanzura Earbuds, Wireless Bluetooth Earphone, Bluetooth Mono Headset,